Kokombra | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Ny karazana voankazo "Herman"
Ny solontenan'ny fianakaviana cucumber cucumber dia manana tantara lava be. Nanomboka nitombo 6000 taona lasa izay. Ny tanindrazin'io legioma io, izay voankazo siantifika, dia heverina ho India. Saingy, na eo aza izany, ny sehatry ny fambolena sy ny fitrandrahana an'ity vokatra ity dia tena goavana. Na dia tamin'ny andro fahiny aza, ny olona avy any Afrika, Gresy, ny Empira Romanina dia nanararaotra an'io legioma io, izay avy amin'ny teny grika "aguros" grika taloha, izay midika hoe "tsy misy dikany".
Momordica: fampiasana, toetra ara-pahasalamana sy ny fanoherana
Momordica, na koa antsoina hoe ampongabendaninà Indiana, kibon'ny mangidy, karana na indianina, melon sinoa, dia karazam-bozaka avy amin'ny fianakaviana croquin. Ny tanindrazan'ity zavamaniry ity dia India sy Shina. Misy karazana zavamaniry iray isan-karazany. Amin'ny ankapobeny dia misy karazana mompera efa ho 20.
Ahoana ny fomba famongorana ireo bibikely amin'ny kôkômbra
Isan-taona, ny tantsaha sy ny zaridaina dia mitaraina momba ny vongan-tsigara, izay mampihena ny fiarovana ny vokatra ary manimba azy manontolo. Matetika ny parasite dia manjary manimba fahasimbana ampy vao voamarika ary hanomboka hikorontana. Ilaina ny maneho tsindraindray amin'ny bibikely samihafa, bibikely sy lava, izay tsy ahafahanao mamotika ny vokatra na manaparitaka ny zavamaniry amin'ny aretina.
Ahoana ny fomba hahazoana voka-tsoa goavambe, fambolena mampiasa hydroponics
Ny kôkômba mahazatra - isan-taona isan-taona vokatry ny fianakaviana Pumpkin. Nipoitra tany amin'ny kolontsaina 6.000 taona lasa izay, i India no heverina ho toerana nahaterahany. Ao amin'ny fambolena zavamaniry maoderina, misy fomba maro ahafahana mampitombo cucumbers: eo amin'ny tapisady, ao anaty barìka, ao anaty horonantsary, anaty kitapo sy kitapo, ary mampiasa ny hydroponics, izay efa mahazatra ankehitriny.
Cucumber-lemon: exotic ao amin'ny zaridaina
Maro ny karazana kôkômbinina novolavola, izay samy hafa amin'ny fahamatorana, ny endrika, ny habe, ny lokony, ny vokatra, ny fanoherana ny bibikely sy ny aretina. Any amin'ny faritra ambanivohitra sy ny zaridainan-javamaniry dia mitombo avo dia avo ny kôlôma. Na dia izany aza, vitsy no mahalala fa misy karazana voankazo mahatsikaiky, ny voankazo dia azo ahodina sy hohanina.
Ahoana ny fomba hiarovana ny kôkômbra avy amin'ny boaty, fomba fiasa amin'ny bibikely madinika
Tsy isalasalana, ny proteinina dia heverina ho iray amin'ireo bibikely manimba indrindra sy manimba. Maro amin'ireo karazany ireo no hita any amin'ny zaridaina misokatra sy ny saha fambolena. Indrindra fa ny fandroana toy ny fambolena cucumbers sy melons. Matetika dia misy kôkômbinina ao amin'ny trano fonenana, na dia eo aza ny fepetra fiarovana. Mba hisorohana ny bibikely, mila mahafantatra ny fomba handrafetana ranom-boasary tsy misy herisetra amin'ny zavamaniry.
Mila mifandona amin'ny voninkazo tsy misy fotony aho
Ny fambolena kôkômbinina dia midika ho famokarana kolon-tsakafon'ny hafanana, fahazavana ary fahamendrehana. Nefa mahagaga fa rehefa tsy misy ny fijinjana. Maro ny voninkazo amin'ny tsimparifary, saingy mipoitra izy ireo. Ary mitranga izany noho ny fitaovana voajanahary voajanahary sy ny fahadisoana amin'ny teknolojia momba ny fambolena. Andeha hiezaka hamantatra izay tokony hatao raha misy voninkazo tsy misy vidiny amin'ny kôkômbra, ary handinika amin'ny antsipiriany bebe kokoa ny anton'ny fisehoany.
Fifantenana ny masira kômera tsara indrindra mba hambolena ao amin'ny firenena
Isika rehetra dia efa zatra amin'ny legioma tsotra sy mora vidy toy ny kôkômbra. Ny kongresy dia vahiny mipetraka eo amin'ny latabatra isan-taona: vaovao amin'ny fahavaratra, amin'ny ririnina amin'ny endriky ny pèla. Ary zara raha mihaona amin'ny zaridaina toy izany, izay tsy mahita an'io legioma io ao amin'ny zaridaina. Hoatran'ny hoe, inona no mety ho kongora mora kokoa? Saingy hafa ihany koa izy ireo: amin'ny endriny, ny habe, ny lokony, amin'ny farany, ny mamomamo.
Teknolojia fampiroboroboana gorobaka
Ny komandy dia lasa iray amin'ireo legioma lehibe indrindra tafiditra ao amin'ny sakafo isan'andro ataon'ny mpiray tanindrazana amintsika. Miaraka amin'ny ovy sy voatabia, dia mitombo izy ireo saika amin'ny zaridaina rehetra. Ny lahatsoratra dia hiresaka momba ny Finger, famaritana ny kôkômbra amin'io karazany io, ny endriky ny fikarakarana ny fambolena sy ny fambolena. Famaritana isan-karazany Ity karazana vary ity dia i Sefatov V.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Kokombra